FLV Free MP3 in Converter
> Resource > Free > Top 5 Free FLV in MP3 Converter
Kasta oo hadda ka dibna, waxaa dhacdo in aan dareemayaa dhageysto a file maqal ah oo gaar ah ama hees. Laakiin nasiib daro ka dib markii raadinaya saacadood ee internetka aan ku guuldareysato inay ka helaysaan ama aan ka helo in la heli karo oo keliya kharash ah. Hadda, halkii bixinta qiimaha heshiiska waxiibsashada u jeclaystay, sida kale oo aan sidoo kale hel kartaa file ka ay il. Si kastaba ha ahaatee, inta badan oo ka mid ah ilaha files waxaa laga helaa FLV ama qaabab File Flash. Si kastaba ha ahaatee, mar file ayaa ku yaalaan, waxaan mar walba u bedeli karaan faylasha FLV, kuwaas oo si qaab MP3 ah oo uu dhegaysan iyagii jeer oo mar kale ka dib markii lagu kaydiyo MP3s ee disk adag.
Laakiin taas loo sameeyo, waxaan hubaal r equire barnaamijka Converter taas oo awood u leeyihiin qabashada shaqo la doonayo, oo aan kaliya fudud, laakiin sidoo kale ka dib markii ay isku day dhowr ah oo uu noqonayaa sida ugu fudud ee wax nidaamyada kale ee caadiga ah.
5 Softwares ugu caansan ee loo isticmaalo FLV ah in MP3 diinta iyo waa iska diyaar on shabaqa ku qoran yihiin hoos:
Wondershare Video Converter waa mid ka mid ah kuwa ugu ballaaran loo isticmaalo video converters in lagala soo bixi karaa Internetka. Tani software qabanin badasha wax files FLV in qaab MP3 30 jeer ka dhakhsi badan oo dhan converters kale laga heli karaa internet-ka. Waxa kale oo ay awood u duuban iyo Web videos kaliya click ku qabsaday. Dhammaan kontaroolada ee software this waa dareen leh oo ay leeyihiin oo dhan ay gacanta ku hayaan badhamada waaweyn ee la dhigay baxay.
Freemake Video Converter waa codsi kale oo sare fasalka waa awood diinta FLV in qaabab MP3 audio. Waa video Converter kaliya in dooxi karaa online videos iyada oo si toos ah u shaqeeyaan, Jinka nuqul URL ka websites sida Facebook, LiveLeak, YouTube, vimeo iyo kuwa kale. Waa hagaag aqoonsan ay DHCP aad u hooseeya, video Converter this isku CUDA iyo DXVA technology for ratio diinta ka dhaqso iyo natiijada sidoo kale ka fiican faylasha wax soo saarka ay.
MP4 Free Video Converter waxaa sidoo kale inta badan loo isticmaalo FLV ah in MP3 diinta sida ay sidoo kale awood u audio soo saarida ka playlists YouTube. Sida xarunta dar-ku ah, taas software qabanin xitaa u qoraan karaan wicitaanada ka Skype. Shirkadda Tani waxay sidoo kale bixisaa 40+ codsiyada functional lagu kalsoonaan karo oo ammaan ah oo u ogolaan user ay u saxaa, diinta iyo sidoo kale audio iyo sidoo kale videos gubi dhexeeya qaabab kala duwan.
FFmpeg, sida magacaba ka muuqata waa xal kale cross madal diiwaan geliya iyo badasha audio iyo videos geeyo ka FLV ah in qaabab MP3 ah. Software ku xirayaa audio ama video codec maktabadda keentay "libavcodec" oo gabi ahaanba waa software ah oo lacag la'aan ah kaas oo isticmaala liisanka LGPL ama GPL ku xiran tahay xulashada habka qaabeynta aad.
Mediaconverter (Converter Online)
Mediaconverter waa madal kale oo lacag la'aan ah oo si weyn lagu talinayaa in beddelidda ee files FLV in ay qaabab MP3 ah. Website-kani wuxuu bixiyaa saaxir diinta taas oo awood u hogaamiyay xitaa laawe ah si aad u hesho samaysay diinta file ay dhawr miridh. Tani diinta software online gabi ahaanba waa bilaash ah si ay u isticmaalaan. Si kastaba ha ahaatee, kuwa doonaya in ay waxa ay marar badan u isticmaalaan, waxay u baahan doontaa inaad buuxiso maamuuska kor u saxiixay taas oo ka caawisa si ay u helaan isticmaalka xad lahayn goobaha ay.